Induction kushushikana kunodzikamisa zvakaperera blad neIGBT MF induction heater
Induction Kushungurudzika kusunungura inoiswa kune ese ari ayoni uye asiri-ayoni alloys uye inoitirwa kubvisa zvemukati zvakasara zvinetswa zvinogadzirwa neyemberi yekugadzira michina senge machining, kutonhora kutenderera uye kutenderera. Pasina iyo, kunotevera kugadziriswa kunogona kupa kukanganisika kusingagamuchirwe uye / kana izvo zvinhu zvinogona kutambura nezvinetso zvebasa sekushushikana nehusimbe kutsemuka. Iyo yekurapa haina kuitirwa kuburitsa shanduko dzakakosha muzvivakwa zvezvinhu kana zvemagetsi zvimiro, uye nekudaro zvinowanzo ganhurirwa kune tembiricha yakaderera.
Carbon steels uye alloy steels anogona kupihwa maviri mafomu ekushushikana kwekushushikana:
1. Kurapa panguva yakajairwa 150-200 ° C kunoderedza kunetseka kwepamusoro mushure mekuomesa pasina zvakanyanya kudzikisira kuomarara (semuenzaniso kesi dzakaomeswa, mabheyaringi, nezvimwewo)
2. Kurapa panguva inowanzoitika 600-680 ° C (semuenzaniso, mushure mekushuchisa, machining, nezvimwewo) kunopa zororo rakakwana.
Kushungurudzika kurerutsa zvakaputsika kabhoni simbi pachiyero chemamita makumi matatu / 30 metres paminiti kudzikisira kuomarara kubva kune yekunze 9.1 ”/ 2mm padivi rega rega kubvisa nyaya dzekupaza neyekupedzisira chigadzirwa
Chinyorwa: Carbon simbi yakati sandara (5.7-10.2 ”/ 145-259mm yakafara uye 0.07-0.1” /1.8-2.5mm gobvu)
Kakawanda: 30 kHz
Induction Heating Equipment: HLQ 200kW 10-30 kHz yekudziya inotonhodza sisitimu yakagadzirirwa neiri kure kupisa chiteshi chine zvisere 10 μF capacitors
- Iyo yakawanda kutendeuka kutsemura induction yekupisa coil yakagadzirirwa uye kugadzirirwa zvakanakira ichi chishandiso
Maitiro eCarbon simbi sandara mabara anomhanya kuburikidza neiyo induction coil pachiyero chemakumi matatu tsoka / 30 mita paminiti kutsamwa kana kushushikana kubvisa kabhoni simbi. Munguva iyi, simbi yekabhoni ichapisa kusvika ku9.1 ºF (1200 ºC). Izvi zvichave zvakakwana kubvisa basa kuomesa kubva 649 ”/ 2mm yedivi rega rehupamhi.
Speed: Induction inokurumidza kupisa iyo kabhoni simbi kune tembiricha, iyo inogonesa chiyero chemamita makumi matatu paminiti
-Kukwanisa: Induction Kutya kwete chete inochengetedza nguva yekugadzira, zvakare inochengetedza simba remagetsi
-Footprint: Induction inotora tsoka ine mwero, saka inogona kuitiswa zviri nyore mukugadzira nzira senge
Kurapa pane zvakajairwa 150-200 ° C kunoderedza kunetseka kwepamusoro mushure mekuomesa pasina zvakanyanya kudzikisira kuomarara (semuenzaniso kesi dzakaomeswa zvinhu, mabheyaringi, nezvimwewo):
-Kurapa panguva inowanzoitika 600-680 ° C (semuenzaniso, mushure mekudonha, machina nezvimwewo) zvinopa zororo rakakwana.
-Non-ferrous alloys kushungurudzika kunoregedzwa pane akasiyana tembiricha ine hukama neiyo alloy mhando uye mamiriro. Maalloys anga akaomeserwa zera anongorambidzwa kushushikana kudzikisira tembiricha pazasi peye tembiricha yekukwegura.
Austenitic simbi dzisina simbi dzakaderedzwa pasi pe480 ° C kana pamusoro pe 900 ° C, tembiricha iri pakati pekudzora kuramba ngura mumakiredhi asina kugadzikana kana pasi-kabhoni. Mishonga inopfuura 900 ° C inowanzo kuve yakazara mhinduro anneals.
Normalizing Inoshandiswa kune vamwe, asi kwete ese, mainjiniya steels, akajairika anogona kupfava, kuomesa kana kushushikana kunorerutsa chinhu, zvinoenderana nemamiriro ayo ekutanga. Chinangwa chekurapa ndechekupokana nemhedzisiro yemaitiro epamberi, sekukanda, kuumba kana kuumburuka, nekunatsa iyo isiriyo yunifomu dhizaini kuita iyo inosimudzira kusagadzikana / kugadzikana kana, mune mamwe mafomu echigadzirwa, inosangana neyekupedzisira michina zvivakwa zvinodiwa.
Chinangwa chekutanga kugadzirisa mamiriro esimbi kuitira kuti, mushure mekuumbwa kweinotevera, chinhu chinopindura zvinogutsa pakuomesa mashandiro (semuenzaniso kubatsira kudzikama). Kujairisa kunosanganisira kupisa simbi yakakodzera kune tembiricha kazhinji mumatanho 830-950 ° C (kana pamusoro pekupisa kwekuomesa kwesimbi dzinoomesa, kana pamusoro pekupisa kwetembiricha yemagetsi esimbi) uyezve kutonhora mumhepo. Kuchenesa kunowanzoitwa mumhepo, saka inotevera michina kana yekumusoro kupedzisa inodikanwa kubvisa zviyero kana decarburised materu.
Mhepo inodzikamisa simbi (semuenzaniso, dzimwe simbi dzemotokari) dzinowanzo "dzorwa" (subcritically annealed) mushure mekumisikidza kurerutsa chimiro uye / kana kusimudzira kusagadzikana. Mazhinji magadzirirwo enhandare anodawo kusangana uku kwekurapa. Midziyo isingawanzo kuverengerwa ndeiya inogona kuomarara zvakanyanya panguva yekutonhora kwemhepo (semuenzaniso matinji mazhinji emidziyo), kana ayo asingabatsirike kana kuburitsa zvivakwa zvisina kukodzera kana zvimiro zvemakanika (semasimbi asina simbi).
Categories Technologies Tags kabhoni simbi kushushikana kudzikamisa, Induction kupisa kunetseka kudzikisira, kuburitsa kupisa kupisa kusagadzikana, kuderedzwa mupfungwa kuderedza, induction kushushikana kunodzikamisa hita, kushungurudzika kurerutsa, kushushikana kudzikamisa zvakaperera, kushungurudzika kugadzirisa maitiro Post navigation